» तु खबर
भानु माविमा भवन बनाउँदा बिम नै गायब, १६ एमएमको रड ६ वटा हुनुपर्नेमा ४ वटामात्रै प्रयोग
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिकास्थित भानु माद्यमिक विद्यालय परिसरमा निर्माण थालिएको नयाँ भवन प्रचलित मापदंड विपरित रहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको सो विद्यालय परिसरमा निर्माण भइरहेको १२ कोठे भवन आचारसंहिता र भवन निर्माण सम्बन्धी मापदंड विपरित रहेको खुलेको हो ।
सो भवन निर्माण गर्दा त्यसको भुइँ (प्राविधिक भाषामा प्लिन्थ लेभल भनिन्छ ) मा राख्नुपर्ने वेस बिम नराखेको पाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सो बजेटभित्र रहेर भवन निर्माण गर्न विद्यालयले निर्माण समिति समेत बनाएको छ । सो समितिले पनि भवन निर्माण गर्दा बेस बिम राख्न छुटेको स्वीकार गरेको छ ।
निर्माण समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर योञ्जनले पहिले भवन निर्माणको काम सुरु गर्दा प्राविधिकले नै बेस बिम राख्न नपर्ने बताएको तु खबरलाई जानकारी दिए । ‘पहिले प्राविधिकले पर्दैन भने, मैले प्राविधिकको सल्लाह अनुसार नै गरेको हो–उनले भने ।
प्लिन्थ लेभलको कूल १० वटा बिममध्ये ४ वटा बिम नै नहाली निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । प्राविधिक बिष्णु ढुंगानाले भने पहिलो (फस्ट बिम) नभएर केही पनि फरक नपर्ने दावी गरेका छन् ।
त्यसैगरी निर्माणका लागि प्रयोग गरिने सामग्री(मसला) मा सिमेन्ट कम प्रयोग गरिएको छ । मसला तयार पर्दा सिमेन्ट, वालुवा र गिटीको मात्रामा पनि ठगी गरिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अुनसार, भवन निर्माण गर्दा १६ एमएमको ६ वटा रड प्रयोग गर्नुपर्नेमा ४ वटामात्रै प्रयोग गरिएको छ ।
गल्ती भएकै हो, – प्रअ थापा
विद्यालयका प्रअ राजेन्द्र थापाले प्लिन्थ बिम (फस्ट बिम) नहाली निर्माण अघि बढाइएको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले करिब २० दिन भित्र डिपिआर अन्तरगतको बेस निर्माणको काम सक्नुपर्ने बाध्यता भएकोले निर्माणको काममा केही कमजोरी भएको हुनसक्ने बताए ।
चालु आवभित्रै निर्माणको काम सक्नुपर्ने बाध्यता थियो, भवन प्राविधिक निर्माणस्थलमै हुनुहुन्थ्यो, प्राविधिककै रोहबरमा काम भएको हो, तर निर्माणको जिम्मा पाएको समितिले ४ वटा बिमनै नहाली काम अघि बढाउनुभएछ – प्रधान्याध्यापक थापाले भने ।
‘गल्ती भएको हामी स्वीकार्छौँ, भवन प्राविधिकहरुसंग निरन्तर सल्लाह लिइरहेका छौँ । भवन बलियो र गुणस्तरीय कसरी हुन्छ भन्ने बारे ब्यापक छलफल र सल्लाह लिएर निर्माणको काम अघि बढाइने छ’ – उनले थपे ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका प्राविधिक विष्णु ढुंगानाले प्लिन्थ बिम नहालेर केही फरक नपर्ने भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका छन् । तु खबरसंग कुराकानी गर्दै प्राविधिक ढुंगानाले भने, ‘ बिम छुटेको हो, हामी माथि थप्छौँ, केही फरक पर्दैन ।’
स्रोतका अनुसार भवन निर्माणको लागि नक्सा उनकै कन्सल्टेन्सीबाट बनाइएको हो, उनकै कन्सल्टेन्सीबाट भवनको नक्सा निर्माण गरिएको र उनकै रोहबरमा निर्माणको काम भएकोले बिम नहालेको बारे उनी जानकार छन् – स्रोतले भन्यो ।
निर्माण समितिका संयोजक योञ्जनले लेआउटको चरणमा भवन प्राविधिकले प्लिन्थ बिम नहालेपनि हुन्छ भन्नुभएकोले आफुले बिम नहाली निर्माण अघि बढाएको बताएका छन् ।
६ वटामात्रै बिम हाल्दा हुन्छ भन्नुभयो, मैँले प्राविधिकको सल्लाह अनुसारनै गरेको हो – उनले भने ।
अन्य कमिकमजोरी भएको रहेछ भने सुधार्ने उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मकवानपुर जिल्लाका २ वटा विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सोही कार्यक्रम अनुसार श्री भानु माध्यामिक विद्यालयमा १२ कोठे ३ तल्ले नयाँ भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
५ बर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ भने करिब ४ करोड रुपैँया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ तर निर्माणमा गम्भीर लापरबाही भएको तथ्य बाहिर आएपछि अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसलाई कसरी समाधान गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार पुडासैनीले यो गुनासो गाउँपालिकासम्म आइपुगेको र यसबारे गाउँपालिकाले पनि अध्ययन गरिरहेको तु खबरलाई जानकारी दिए । हिजो हामीले अनुगमन गरेका थियौँ, गल्ती सच्याउन भनेका छौँ, पुडासैनीले भने ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हो, फारम भर्न सीडीओ कार्यालयमा जानुहोस्
मकवानपुर । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि अनलाइन विवरण भर्ने काम सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सम्बिन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फिल्ड अफिस तोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरबाट पनि विवरण संकलनको काम सुरु भएको हो ।
सूचना अधिकारी देवचन्द्र गर्तौलाका अनुसार, आजबाट नागरिकहरुको विवरण अनलाइनमार्फत् भर्ने कार्य सुरु भएको छ । नागरिकले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, बुबा र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आई राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्न आवेदन दिन सक्ने उनले बताए ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रशासकीय अधिकृत देवचन्द्र गर्तौलाको विवरण भरी सो कार्यको सुरुवात गरिएको छ । यस अवसरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित सबै जना रिहा
काठमाडौँ । असार १५ गते नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेका स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित सबै १२ जनालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले हिजो आदेश दिएपछि उनीहरु सबै जना रिहा भएका छन् ।
एमसीसीलगायतका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको विरोध गर्ने क्रममा असार १५ गते माइतीघर मण्डला तर्फ जाने क्रममा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी झुठा मुद्धा लगाएको थियो । त्यस विरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको थियो ।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासले पक्राउ गैरकानूनी देखिएकोले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन् ।
नेपालसहितकाको तर्फबाट १ सय १० जना अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ मा गम्भीर त्रुटी रहेको तथ्य तु खबरले फेला पारेको छ ।
प्रदेशसभामा असार १६ गते पेश गरिएको विनियोजन विधेयकमा समाजिक विकास मन्त्रालय तर्फको बजेटमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई मेची, महाकाली, सेती, धौलागिरी, पर्वत, जनकपुर, लुम्बिनी र दैलेखका अस्तापतालमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पेश गरेको सो बिधेयकमा उल्लेख भएको तथ्यका आधारमा कुपोषण व्यवस्थापनका लागि पोषण पुर्नस्थापना गृह संचालन शीर्षकमा ओखलढुंगा अस्पताललाई ५० लाख, जनकपुरलाई ५० लाख, धवलागिरी अस्पताललाई ४५ लाख, पर्वतलाई ४० लाख, लुम्बिनीलाई ५० लाख, दैलेखलाई ४० लाख, महाकालीलाई ५० लाख र सेती अस्पताललाई ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
विनियोजन बिधेयक २०७७ को पाना नं. २८५ मा बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई बजेट बनाएको फेला परेको छ । यस्तै गम्भीर त्रुटीहरु सो बिधेयकको अन्य पानामा पनि छन् ।
बिनियोजन बजेटको २८९ नम्बर पानामा पनि गम्भीर त्रुटी छ । बाागमती प्रदेशभन्दा बाहिरका थुप्रै जिल्लाहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले बजेट छुट्याएको छ ।
सो पानामा लेखिएको तथ्य अनुसार, हात्तीपाइले इन्डेमिक जिल्लाहरुमा मोबिडिटी म्यापिङ विरामी व्यवस्थापन तथा अपाङ्ता रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न धनकुटा, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, स्याङ्जा, बागलुङ, प्युठान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, बर्दिया, सल्यान, दार्चुला र बझाङमा पनि रकम छुट्याइएको छ ।
स्वागत नेपालसहित १२ जनालाई मुद्धा लगाउने तयारी
काठमाडौँ । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपालमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्धा चलाउने तयारी गरेको छ । उनीसँगै यो मुक्तामा १२ जनालाई आरोपी बनाइदैछ ।
भ्रष्ट्राचार,घुसखोरी र सिमा अतिक्रमण लगायतका विरुद्धमा स्वागत नेपाल नेतृत्वको अभियानले बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको थियो ।
सडकमा शरीरबाट रगत बगाउने कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको र यो कार्य हिंसात्मक भएकाले उनीसमेत १२ जनालाई पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्धा चलाउने तयारी गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् ।
सुस्मिताको हत्यारालाई फाँसीको माग गर्दै हेटौँडामा नाराबाजी (हेर्नुहोस् भिडियो)
मकवानपुर । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ४ की सुस्मिता केसी थापाको हत्या प्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आज हेटौँडामा सयौँको संख्यामा नागरिकहरुले नाराबाजी गरेका छन् ।
केसीको हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायलाई दबाबस्वरुप नागरिकहरुले नाराबाजी गरेको पत्रकार अजिव भट्टराईले तु खबरलाई जानकारी दिएका छन् ।
हेटौँडाको बुद्धचोकबाट सुरु भएको सो र्यालीले हेटौँडा बजार परिक्रमा गरी पुन बुद्धचोकमै पुगेर मृतक केसीको आत्माको चिरशान्तिको कामनासहित दिप प्रज्जवन गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार भट्टराईले जानकारी दिए ।
र्यालीमा ‘ हत्यारालाई फाँसी दे फाँसी दे ’, ‘सुस्मितालाई न्याय दे न्याय दे’, ‘ बुहारी मार्न पाइँदैन पाइँदैन’ भन्दै नारा लगाइएको छ ।
केसी असार २ गते हेटौँडा ४ स्थित आफ्नै निवासमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।मकवानपुर प्रहरीले सो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
लकडाउन तोडेको आरोपमा पक्राउ परेका बाउ–छोराको हिरासतमा मृत्यु भएपछि हंगामा
भारत / लकडाउन उल्लंघनको आरोपमा भारतको तमिलनाडुमा पक्राउ परेका एक पिता र उनका छोराको कथित रुपमा प्रहरी हिरासतमा भएको उत्पीडनका कारण मृत्यु भयो जसका कारण पूरा राज्यमा आक्रोशको माहौल छ ।
५८ वर्षका के पी जयराज र ३८ वर्षका उनका छोरा बेनिक्सलाई लकडाउनको क्रममा तोकिएको समयमा पनि पसल खुल्ला राखेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । तमिनाडुमा अहिले पनि कोरोनाका कारण लकडाउन छ ।
जयराज र बेनिक्सलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो । दुई दिनपछि दुबैको मृत्यु भयो । दुबैको मृत्युबीच केहि घण्टाको मात्रै अन्तर थियो ।
जयराज र बेनिक्सका आफन्तले हिरासतमा दुबैलाई यातना दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
यो घटना भारतको पहिलो घटना भने होइन । लकडाउनको क्रममा देशका विभिन्न हिस्सामा कथित रुपमा प्रहरीको बर्बरता र यातनाको खबर आएको थियो । यो घटनालाई पनि यसैको उदाहरण मानिएको छ ।
के गर्दथे बाउ–छोरा ?
जयराज थुतुकुडी तुतीकोरिन जिल्लाको सतानकुलमका निवासी थिए । सतानकुलममा उनका छोरा बेनिक्सको एपिजे मोबाइल्स नामको एउटा सानो मोबाइल पसल थियो ।
शुक्रबार १९ जूनमा जब प्रहरी यो इलाकामा पसल बन्द गर्न आइपुगे तब बेनिक्सको उनीहरुसँग बहस भएको थियो ।
त्यसपछि सतानकुलम प्रहरीले बेनिक्स र उनका पिताविरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेका थिए त्यसपछि जयराजलाई प्रहरी स्टेशन पुर्याइयो ।
बुवाका पछिपछि बेनिक्स पनि प्रहरी स्टेशन पुगे र उनलाई पनि बुवासँगै जेलभित्र थुनियो ।
प्रहरीको एफआइआरका अनुसार लकडाउनमा प्रहरी जब निश्चित समयपछि खोलिएको पसल बन्द गराउन पुगे तब त्यहाँ जयराज, बेनिक्स र उनका केहि साथी उनको पसलको अगाडि उभिएका थिए । प्रहरीले उनलाई आ–आफ्नो घर जानका लागि भने तर उनीहरुले प्रहरीलाई गाली गरे र प्रहरीलाई उनीहरुको काम गर्न दिएनन् ।
एफआइआरका अनुसार उनीहरुले प्रहरी अधिकारीलाई हत्या गरिदिने धम्कीसमेत दिए ।
कोविलपट्टीको सरकारी अस्पतालमा सोमबार राती बेनिक्सको मृत्यु भयो र त्यसपछि मंगलबार सबेरै जयराजको मृत्यु भयो ।
जिल्लाका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा बीबीसीलाई भने, ‘सोमबार जून २२ कम बेलुका छाती दुखेपछि ढलेका थिए । त्यसपछि जेल सुपरिन्टेन्डेन्टको मद्दतले ड्युटीमा तैनाथ वार्डनले उनलाई उपचारका लागि कोविलपट्टी सरकारी अस्पतालमा भर्ना गरे । तर राती करिब ९ बजे उनको मृत्यु भयो । त्यसको केहि घण्टापछि जयराज पनि बिरामी भए र उनलाई पनि अस्पताल भर्ना गरियो । मंगलबार बिहानै पाँच बजे उनको मृत्यु भयो ।’
उनीहरुका आफन्त चार्ल्सले भने, ‘प्रहरीले एफआइआरमा भनेको छ कि भुईंमा लडेका कारण उनीहरुलाई आन्तरिक चोट लाग्यो । के यस्तो पनि सम्भव छ, यसरी लडेर कसैको मृत्यु हुनसक्छ रु सतानकुलममा थुप्रै जेल छन् । उनीहरुलाई सय किलोमिटर टाढा कोविलपट्टीको जेलमा किन राखिएको थियो ?’
यातना दिएको आरोपः
आफन्तले आरोप लगाए अनुसार बेनिक्सको मृत्यु अत्यधिक रक्तश्रावका कारण भएको हो । बेनिक्सको मलद्वारमा लठ्ठी छिराइएको आरोप छ । यद्यपि, प्रहरीले आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्नै बाँकी छ ।
थाहा नगरको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम – संस्थागत विकासतर्फ यस्तो योजना
मकवानपुर । थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा रिक्त रहेका कर्मचारी दरबन्दी पदपूर्ति तथा बढुवा गर्न कानून निर्माण गर्ने र नगरसभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जीवन सुरक्षाको लागि जीवन बीमा तथा कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी संचालनमा समयानुकुल कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
काम गर्ने कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ता दिने व्यवस्था गरिने र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पुरस्कारका साथै विशेष सम्मानको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
आगामी आवको लागि सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सबै वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट सहित कम्प्युटर नेटवर्किङ गरेर कर र राजश्व लिने, वडाबाट नगरपालिकामा पठाउनुपर्ने सिफारिस तथा पत्राचारलाई पेपर लेस गरी अनलाईन मार्फत नै पठाउने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।
आयोजना संचालन स्थलमा होडिङबोर्ड अनिवार्य राख्ने र १५ प्रतिशत आयोजनाको लागत सहभागिता उपभोक्तबाट ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिने, नगरबाट संचालन हुने विकास योजनाहरुलाई सरल र छिटो छरितो गर्न थाहा नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
नगर क्षेत्रमा लागत सहभागिताको योजनालाई उच्च प्राथमिकताको साथ संचालन गरिनुको साथै लागत सहभागिताका योजना संचालन गर्दा निजी क्षेत्रले सडक, खानेपानी तथा विजुली विस्तारमा ५०र५० प्रतिशत र आम सरोकारका लागि लागत सहभागिता ७०र३० सहभागितामा योजनाहरु संचालनको लागि कोषको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सबै वडा कार्यालयहरुका प्रशासनिक भवन सम्पन्न गरी वडा कार्यालयबाटै प्रशासनिक कार्य संचालन गरिनुको साथै वडाका पदाअधिकारीहरुको अनिवार्य कार्य विभाजन गरी सोको प्रगति वडा अध्यक्षले कार्यपालिकामा पेश गर्ने कार्यको थालनी गरिने भएको छ ।
उपभोक्ता समितिहरुलाई तालिम दिने, लागत स्टीमेटलाई नेपालीकरण गर्ने र उपभोक्ता समितिहरुको रकम सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ, नगरस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण जस्ता कार्यहरुलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
यस्ता कार्यमा सर्वपक्षीय उपस्थितीलाई ध्यान दिइनुको साथै योजना अनुगमन पश्चात् योजनाको १० प्रतिशत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
नगरपालिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन थप आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यानवयनमा ल्याइनुको साथै न्यायिक समितिलाई समायानुकुल कानूनी जानकारी गराउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने भएको छ ।
वडा तहमा रहेका मेलमिलाप सहजकर्ताहरुलाई नगरमा सूचिकृत गरिनुको साथै मेलमिलाप समिति गठन गरी सामान्य विवाद वडा तहबाटै समाधान गरिने भएको हो ।
नगरपालिका कार्यालयको प्रशासनिक तथा नगरपालिकाका सबै गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि अनलाइनमा तथा सम्बन्धीत सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली अपनाइने भएको छ ।
नेपालमा आतंकवादी घुसपैठ हुनसक्ने अमेरिकी प्रतिवेदनको निष्कर्ष
बिप्लव नेतृत्वको नेकपाको चर्चा गरिएको प्रतिवेदन ह्वाईट हाउसमा सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र भनेर दावी गर्ने अमेरिकाले नेपालमा आतंकवादी घुसपैठ हुनसक्ने व्यहोराको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्री मिकेल आर पोम्पियोले सार्वजनिक गरेको ३०४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्नेदेखि बिप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि समेतको चर्चा गरिएको छ ।
अमेरिकी विदेशी मन्त्री मिकेल आर पोम्पियोले सन २०१९ को विश्व आतंकवादबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालबारेमा सचेत चर्चा गरेका हुन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरुले प्रयोग गर्न सक्ने खतरासहितको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेसँगै नेपालीमाथि अमेरिकी चासो बृद्धि हुने अनुमान गरिएकोछ । सो प्रतिवेदनमा बिद्रोही नेकपाको समेत निकै चर्चा गरिएको छ ।
सन् २०१९ भरिमा बिद्रोही नेकपाले कूल ३४ वटा बम विस्फोट गराएको, पाँच वटा नक्कली बम राखेको र २९ वटा विभिन्न आगजनी तथा तोडफोडका घटनाहरु गराएको अमेरिकी विदेशी मन्त्री पोम्पिओले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिप्लव नेतृत्वको समुह भनेर चिनाइएकोे छ ।
बिप्लवबारे सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले बिप्लवलाई आतंककारी कोणबाट नहरेको समेत उल्लेख छ । सरकारले उग्रपंथी तथा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको द्वन्दका बेला उत्पन्न भएको समुहको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेकोछ । सो पार्टीले गरेको एनसेल टावरमाथिको आक्रमण अमेरिकी प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समुहहरुले नेपाली भूमिलाई आफ्ना गतिविधि सञ्चालनको लागि कठिन स्थानको रुपमा बुझेको देखिन्छ । गैर नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समुहले नेपाललाई नरम लक्ष्य ( संगठन विस्तार, संरक्षण तथा परिचालन) का लागि ट्रान्जिट वा कारखाना तथा सम्पर्क केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा अत्याधिक रहेको छ ।’
तस्बिर तथा समाचार समाज अनलाइनबाट साभार गरिएको हो । सम्पादक
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन :